सैनिक कु- खतरा टरेको छैन । – नेपाल डायरी डट कम
पुर्ब राजाले “जनताको नासो”जनतामा फिर्ता गरेको ठिक तिन बर्ष पुग्न लाग्दा नेपाली आकाश मा देखिएका अनिश्चयताका बादलहरु अझ सघन हुदै गहिरहेका छन्। दुर दुर सम्म पनि यो बादल फाट्ने लक्षण देखिएको छैन ।
देसले तेस्रो लोकतन्त्र दिबस मनाइरहदा एउटा अर्को सैनिक “कु” को निकट संभाबना देखिएको छ । सरकारले सोधेको स्पस्टिकरण लाइ चुनौति दिदै सेनापतिले सरकारले हटाए सैनिक कु गर्न खोजेको बिषय अब नया भएन ।२०६२/०६३ को जन आन्दोलन र संबिधान सभाको निर्बचन पछि बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको नेपालको अबस्था, २४० बर्षदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएको राजतन्त्र को अबसान पछि सबैले सोचेका थिए-अब देखि सायद प्रजातन्त्रका लागि अर्को लडाइ लड्नु पर्ने छैन। कम्तिमा युवाले देशका लागी पटक पटक रगत बगाउनु, बलि बेदिमा होमिनु पर्ने छैन । तर बिडम्बना नेपालको अर्को एउटा दुर्भाग्य बाकिँ नै रहेछ , नेपालि जनताले अर्को एउटा लडाइ लड्न बाकि नै रहेछ ।
मंगलबार र बुधबार को उतार चढाब र सेनाको कु तयारी हेर्दा यो स्पस्ट भएको छ,नेपालि सेनामा सक्तिको उन्माद बाँकि नै छ , राजतन्त्रको धङ्धङी बाँकि नै छ र सबभन्दा ठुलो कुरा सासन गर्ने महत्वकांक्षा बाँकि नै छ, नत्र निर्बाचित सरकारले सोधेको स्पस्टिकरण लाइ लिएर यत्रो बबन्डर मच्चाउनु पर्ने अर्को कारण छैन ।
ब्याक्ति/सस्था ले जस्तो सस्कार पायो,जस्तो सस्कार मा हुर्कियो, त्यहि अनुसारको ब्यबहार देखाउछ , सर्पलाइ दुध ख्याएर पाले पनि त्यसले एक दिने ठुङ्छ भन्ने उखान त्यसै आएको होइन । नेपालको सेना सधै सामान्ति हरु बाट संचालित र प्रयोग हुदै आएको छ । त्यसका ठुला-बडा, लाउके-टाउके, रथि-महारथि को छन् तल्लो र मध्यम बर्गिय नेपाली समाज बाट आएका? हुने-खाने, धनि-मानि, राणा, शाह, राज्य रजौटाका सन्तान जहिल्यै जर्नेल/कर्नेल हुने परिपाटी भएको सेनाले अनि कहाँ बाट बुजोस त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र बिधिका सासनका कुरा? अझ कटवाल त दरबारको नुन खाएर हुर्कीएको “प्यादा” हो , त्यहि भएर सैनिक उन्माद देखाउने सुरमा छ । राष्ट्रपतिले पनि नचाहिदो बखेडा झिकेर सेनाको मतियार भएर सासन चलाउने – कु गर्ने सपना नदेखेको राम्रो। राम नाम हुदैमा कोहि भगबान हुदैनन्। शाह पछि “देब”जोडिएका त नागार्जुन मा कालिजको शिकार हान्दै छन भने अरुको के कुरा?
एक्काइसौ शताब्दिका नेपालिहरु लाइ कसैले धेरै नजिस्काए हुन्छ, सासन गर्ने सपना नदेखे हुन्छ । हामि अर्को लडाइ लड्न तयार छौ चाहे त्यो माओबादिको निरंकुसता, एकदलियता वा ,यो र उ कारणले थोपरिन खोजेको सैनिक कु होस – सबैले बुझुन ।तेस्रो लोकतन्त्र दिबसको आजको दिनमा यतिमात्र भनौ, हामिले नत २०६२/२०६३ को जन-आन्दोलन मा सेनाले गरेको नरसंहार बिर्सेका छौ, न त राजाको संकटकालका कठिन दिनहरु।
धम्कि दिनेहरुले कु गरे हुन्छ , हिम्मत देखाए हुन्छ , नत्र भौ-भौ गर्नुको कुनै तुक छैन , हामिलाइ नाटक नदेखाए हुन्छ , नतर्साए हुन्छ ।
Posted in नागरीक,नेपाल डायरीTagged nagarik,Nepal,nepaldiary
अघिल्लो सुद हुन वा पाबेल किन भेट्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा?
अर्को एमाले पार्टि होइन क्लब हुँदैछ ।